Nepal - ‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम
पार्टीले देशभर जित्दा तपाईंले हार्नुभो । चुनावको ६ महिनामै संसद्मा आउने योजना बनेको हो ?
म हारेको होइन । सूर्य वा हँसिया–हतौडामा मतदाता झुक्किँदा ५ हजार मत बदर भए । त्यसैले प्राविधिक रूपमा कांग्रेसका सञ्जय गौतमले जिते ।
डोल्पा निश्चित भइसकेको छैन । मेरा लागि ठाउँ छाड्न एक दर्जन सांसद तयार छन् ।
तपाईं संसद् नगई नहुने किन ?
संसद्लाई दिशा दिन सक्ने, सबैलाई मिलाएर हिँड्ने मजस्तो नेता को छ ? म ०५६ र ०६४ मा संसद्मा भइनँ । ती संसद् असफल भए । म भएका बेला ०४८, ०५१, ०७० मा सफल भए । ०५४ मा स्थानीय चुनाव गराएँ । ०७० मा एमाले–कांग्रेस र माओवादीलाई एक ठाउँ ल्याएर संविधान बनाउन भूमिका खेलेँ । म नलागेको भए शान्ति प्रक्रिया के हुन्थ्यो ? एमाले गणतन्त्रमा जान्थ्यो कि जाँदैनथ्यो ? संविधान बनाउन माओवादी सहमतिमा आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो । तपाईं आफैँ मूल्यांकन गर्नुस् ।
पार्टीमा अहिले के भूमिका छ ?
नहार्नुपर्ने हारेँ । मेरो स्वभाव सधैँ सक्रिय हुने छ । कुनै काममा लागेँ भने सफल पार्छु, नभए असफल नहुँदासम्म लागिरहन्छु । अहिले सचिवालय सदस्य छु । अरू कुनै ठोस जिम्मेवारी छैन । १२/१४ वर्ष भयो, म पार्टीमा पहिलो दर्जाको नेता भइनँ । तैपनि, म रमाएँ । ०५४ मा चित्त बुझेन, पार्टी फुटाइयो । चार/पाँच वर्ष छुट्टै पार्टी चलाएँ, मेरो अपराध त्यही हो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा छु ।
विकास प्राधिकरण हाँक्ने कुरा के भयो ?
नेपालमा एउटा त्यस्तो विकास प्राधिकरण चाहिएको छ, जसले बाधाअवरोधबिनै काम गर्न सकोस् । मैले दुवै अध्यक्षलाई भिजन प्रस्तुत गरेँ । १२ वर्ष लगाएर लेखेको पुस्तकमा धेरै कुरा छन् । उहाँहरू ‘पोजेटिभ छौँ, तयारी हुँदैछ’ भन्नुहुन्छ । अहिलेसम्म भएको छैन ।
तपार्इं संसद्‌मा आउने प्रधानमन्त्री बन्न हो ?
म प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्न हुनुहुन्न भन्ने कहीँ छ ? मेरा सबै समकक्षी प्रधानमन्त्री भइसके । प्रचण्डले संसद्मै मैले अझै एकजनालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न बाँकी छ भन्नुभो । केपी कमरेडले कैयौँ पटक अब वामदेवको पालो भन्नुभएको छ । तर, यो पाँच वर्ष सम्भावना छैन । एउटै प्रधानमन्त्रीले पूरै कार्यकाल चलाउने तय भइसकेको छ ।
नेकपाभित्र प्रचण्ड र वामदेवको गुट बनिसकेको हो ?
अहिले केपी कमरेड र प्रचण्डको जस्तो दोस्ती अरू कसैको छैन । माधवजी दुवैलाई खुसी बनाएर खुसी हुनुहुन्छ । सबैलाई थाह छ, म गुटबन्दी गर्दिनँ । प्रचण्डसँग पुरानो दोस्ती हो, पार्टी एकतापछि गाढा भयो । पूर्वएमालेसँग दोस्ती छँदैछ ।
→यो पनि पढ्नुहोस् : वामदेव रिटर्न्स